Howlo dib u habeyn ah oo lagu sameynayo barxadda dugsiga tababarka Jeneraal Kaahiye “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Howlo dib u habeyn ah oo lagu sameynayo barxadda dugsiga tababarka Jeneraal Kaahiye “SAWIRRO”
Wasiirka Wasaaradda Howlaha guud iyo dib u dhiska ayaa maanta kormeer howleed ku tegtay dugsiga tababarka booliska ee Jeneraal Kaahiye, halkaasi oo dib u dib u habeyn ay ka waddo Wasaaradda howlaha guud oo kaashaneysa hay’adda bisha cas ee Turkiga.
Howlahan kormeerka ah ee ay maanta ku tegtay dugsiga tababarka ciidanka booliska ee Jeneraal Kaahiye Wasiirka Wasaaradda Howlaha guud ee xukuumadda Soomaaliya Eng, Nadiifo Maxamed Cismaan oo uu wehliyo agaasimaha guud ee Wasaaradda ayaa ahayd mid ay ku indho indheyneynayeen sida ay u socdaan howlo dib u habeynta.
Eng, Nadiifo ayaa intii ay kormeerka ku guda jirtay waxa ay halkaasi kula kulantay Taliyaha dugsiga tababarka ciidanka booliska Jeneraal Cabdirashiid Aadan Xirsi, isagoo ka warbixiyay sida ay u socdaan howlaha dib u dayactirka, waxaana uu uga mahadceliyay kormeerka ay ku yimaadeen, isagoo tilmaamay in barxadda akadeemiyada ay noqotay meel biyo fadhiisad ah.
Wasiirka Wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska xukuumadda Soomaaliya Eng, Nadiifo Maxamed Cismaan oo kormeerka kaddib la hadashay Warbaahinta Qaranka ayaa sheegtay in kormeerka maanta ay ka dambeysay codsi uga yimid taliyaha akadeemiyada, waxaana ay intaa ku dartay in barxadda lagu gaardiyo ay xireen fatahaado ka dhashay roobabkii dhawaan caasimadda ka da’ay, ayna ku howlanyihiin sidii arrimahaasi wax looga qaban lahaa.
Dugsiga tababarka ciidanka booliska ee Jeneraal Kaahiye ayaa lagu wadaa in lagu qabto xuska sanadguurada 71aad ee aas aaska ciidanka booliska Soomaaliyeed oo ku beegan 20-ka bishan.